नेपाल आज | हस्तमैथुन गर्नेहरुले जान्नै पर्ने यी कुरा (भिडियो सहित)
भिडियो यौन-शिक्षा स्वास्थ्य
बिहिबार, ०७ साउन २०७८ गते प्रकाशित - नेपाल आज (MG)
यौनान्द लिनका लागि जब आफ्नो यौनाङ्ग स्पर्श गरिन्छ, हस्तमैथुन त्यही हो । हरेकले यो आ आफ्नै ढंगले गर्छन् । हस्तमैथुनको क्रममा उनीहरु यौनजन्य दृश्य, वस्तु आदिको कल्पनामा डुब्छन् । एकथरीको तर्क छ, हस्तमैथुनको स्वास्थ्यमा कुनै हानी छैन । बरु, यसले यौन आवेग शान्त गर्छ । यौन कुण्ठा हटाउँछ । मनोविकार हटाउँछ ।
अर्को फाइदा त के भने, हस्तमैथुनले बलात्कार जस्ता आपराधिक कृत्य कम गर्न सघाउ पुर्‍याउँछ । किनभने यसले क्षणिक रुपमा यौन उत्तेजना शान्त गर्छ । तर, किशोरावस्थामा पुगेपछि बढ्दो यौन चाहाना शान्त गर्न किशोररकिशोरीले यौनाङ्गमा स्पर्श गर्छन् ।
उनीहरुले यो कुरा खुलेर बाहिर भन्दैनन् । र, उनीहरुलाई लाग्छ, ‘कतै मैलें नराम्रो काम त गरिरहेका छैन? ’ यस्तै भावनाले उनीहरुमा हिनताबोध पैदा हुनसक्छ । हस्तमैथुनसँग जोडिएका विभिन्न जिज्ञासाका बारेमा वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. गणेश दंगालको परामर्श यस्तो छः